Larnaca Salt Lake, Larnaca Salt Lake - Larnaka
Eoropa Sipra Larnaca
Adiresy: Artemidos Street, Larnaca, Sipra
Mahatratra halavana: 1 m
Faritany: 2.2 km²
Toerana mahavariana izahay. Ny sasany amin'izy ireo dia fantatra amin'ny fomba fijery ara-tantara, ny hafa dia mahaliana noho ny toetrany, ny hafa dia manana lanjany ara-kolontsaina. Ny farihy saline Larnaca dia mifanaraka amin'ireo fepetra telo. Eo akaikin'ny tanànan'i Larnaka izy io ary amin'ny teny grika dia antsoina hoe Aliki. Afaka mahita ny farihy sira Larnaca irery ianao mandritra ny volana maromaro amin'ny taona. Amin'ny toetr'andro mafana dia manomboka ny rano rehetra, ary mivadika ho sira ny farihy. Amin'izao fotoana izao, Aliki no toerana tokana ao Chypre izay misy sira mipetraka eny ambony.
Miaraka amin'ny endriky ny farihy dia misy tantara mahaliana mifandray. Milaza izy fa niaina an-dry Saint Lazarus eto, eto Chypre. Ary teo ambolon'ny farihy tamin'izany andro izany dia nisy tanimboaloboka maranitra. Indray andro dia nandalo teo amin'izy ireo i Lazar, ary nangatsiakan'ny hetaheta, nangataka ny mpikarakara ny tompon-trano mba hanamaivana ny hetahetany. Fa ny vehivavy midika dia namaly tamina fandavana, nilaza izy fa tsy nanana voaloboka tao anaty harona, fa sira. Tezitra tamin'ilay tovovavy ilay vehivavy, fa nanozona an'io toerana io i Lazarosy. Manomboka eo dia misy farihy iray any Larnaca.
Na izany aza, ny mpahay siansa, na dia tsy mandray am-pahamendrehana ity dikan-teny avy amin'ny farihy ity aza, dia tsy afaka ny hanana hevitra iraisana momba ity raharaha ity. Ny sasany amin'izy ireo dia mino fa teo amin'ny toerana nisy ilay farihy dia nisy bata afovoan-dranomasina, saingy taty aoriana dia nisy ampahany tamin'ny tany ary nisy farihy sira niforona. Ny hafa mino fa misy siramamy goavambe eo ambanin'ilay farihy, izay, noho ny oram-batravatra, dia voasasa. Ary misy koa milaza fa ny sira dia miditra amin'ny farihy amin'ny rano ambanin'ny tany avy any Mediterane.
Ny fitrandrahana sira eo amin'io farihy io dia efa ela no mpitondra hery ho an'ny toekarena ao Sipra. Ny Venetiana, izay nitondra teo amin'ny nosy tamin'ny taonjato XVI-XVI, dia namela antotan-taratasy maro, izay manamarina fa ny fivarotana sira dia nitombo be fotsiny. Isan-taona dia maherin'ny fito-polo sambo no nandao ilay nosy, nafahana tamin'ny sira avy any Lake Larnaka.
Ny fitrandrahana ny sira dia nanomboka tamin'ny fotoana maina, rehefa nirotsaka avy eny amin'ny farihy ny rano. Mampiasà fitaovana farafahakeliny ho an'ny fitrandrahana sira dia tsy mamela ny fihodinana manodidina ny farihy, ka ny asa rehetra dia tsy natao afa-tsy tamin'ny fanampian'ny lapoaly sy ny tanan'olona. Ny sira nohavaozina dia napetraka ho antontam-bato lehibe - ka najoro nandritra ny andro maromaro izany. Taorian'izany dia nafindra tany amin'ny nosy izy ary nalefa tany amin'ny nosy. Tao amin'ny nosy dia tsy maintsy nanitra nandritra ny herintaona teo amoron-dranomasina izy.
Toerana fivahinianana fivahinianana sy trano ho an'ny vorona
Ny farihy saline Larnaca dia fantatra fa tsy ny fanangonam-bolan'ny sira fotsiny ihany. Eo an-dalany dia iray amin'ireo toerana masina malaza indrindra amin'ny silamo - moskea Hala Sultan Tekke , izay nandevenana ny nenitoan'ny Mpaminany Muhammad Umm Haram. Tsy ireo silamo, fa ireo solontenan'ny finoana hafa ihany koa dia afaka mitsidika ny moskea.
Amin'ny ririnina, rehefa miala ao anaty rano ny sira, eto, ao amin'ny farihy sira ao Larnaca, dia afaka mahita ianao fa mahagaga: vorona mpifindra monina an'arivony dia manidina mankany amin'ny farihy. Bibikely, bibikely, ranom-boasary maitso - izay tsy eto. Izany dia ny fomba fanovàna tsara tarehy ny sira tsy misy sira tsy misyina ao anaty tara-pahamendrehana mirona amin'ny fiainana sy loko.
Salt Lake dia mari-pototra manan- danja ao an- tanàna, mahaliana ny mijery ny zava-drehetra ary tsy azo atao afa-tsy amin'ny ampahany amin'ny vondrona fitetezam-paritra ihany, fa tsy miankina ihany koa. Ambonin'izany, ireo mpizahatany dia tsy mahatsapa ho ambany noho ireo vorona mpifindra monina eto. Teo amoron-dranomasina ho azy ireo dia misy làlana manokana, izay misy seza. Afaka miala sasatra sy mankafy ny farihy izy ireo.
Ny fanofana fiara no fomba tsotra indrindra hahatongavana any amin'ny farihy. Avy any Larnaca, mila mankany amin'ny seranam-piaramanidina eny amin'ny araben'i B4 ianao. Avy any Limassol sy Paphos, mila mandeha amin'ny A5 na B5, dia mandehana any amin'ny A3 ary mivilia hiverina amin'ny B4. Safidy iray hafa ahatongavana any amin'ny farihy dia taxi, satria ny fitateram-bahoaka tsy tonga eto.
Ny Mosque Hala Sultan Tekke
Ilay tranombakoka slovenianina ho an'ny tantara voajanahary
Karazana tsy fantatra: 13 sary hosodoko hafahafa no an-tapitrisany
Tao anatin'ny efitrano
Sakafo avy amin'ny kavia
Any Angletera, dia nangalatra ny sora-tanana tsy manam-paharoa momba ny tantaran'ny Harry Potter
Dresses amin'ny style 50 x
Hulahup - tsara sy ratsy
Fanolorana fanomezana ho an'ny Mpampianatra
Baby malaza amin'ny gps tracker
Ny zaza tsy matory amin'ny alina
Ny fomba fitehirizan-tsakafo
Famantarana ny famadihana ny vadiny
Fihetsiketsika mahaliana momba an'i Arabia Saodita
Fango sandalandy ambony 2013
Ny firaiketam-panafody - 44 sary avy amin'ny karazana lamaody indrindra amin'ny fotoana rehetra
Manaova Miley Cyrus